ဂျာနယ်ပါဆောင်းပါးဖြစ်တဲ့ မသိတော့လည်း အဟုတ်မှတ်နေတယ် အပိုင်း(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂျာနယ်ပါဆောင်းပါးဖြစ်တဲ့ မသိတော့လည်း အဟုတ်မှတ်နေတယ် အပိုင်း(၁)
ဂျာနယ်ပါဆောင်းပါးဖြစ်တဲ့ မသိတော့လည်း အဟုတ်မှတ်နေတယ် အပိုင်း(၁)
Posted by ဆန်နီနေမင်း on Oct 21, 2011 in Copy/Paste |4comments
မှန်လှပါ ၊ အပိုင်း ၂ ကို ဆက်လက် ဖတ်ရှု ပါမယ် ဘုရား
အများခေါ် ပုထုဇဉ် ၊ ကျနော့မှာ အူအရိုင်းပေမို့
ကြောင်းနှင့်ကျိုး မှတ်စဉ် တတ်ကာဖြင့်
ဆောင်ရန်ကို ကျိုးစစ် ကောင်းတွေကြောင့်
နာရမည့် အရေး မျှော်ကာတွေးလို့
အရှင်မြတ်ဘုရား … ။
ဘုန်းဘုန်းဘုရား အမှန်တရားမှာ dimension ဘယ်နှခုရှိပါသလဲခင်ဗျား ..
ဇာတ်ကား လေးထဲမှာ .. လေ .. လူကြီးလေး နဲ့ လူငယ်လေး ပြောကြတယ် ..
လက်ဝါးပေါ်မှာ “၁” ပုံလေး တင်ပီးတော့ .. တဘက်ကကြည့်ရင် “၁” တဲ့။ အဲ ကျန်တဘက်ပြောင်းသွားရင် “င” ဖြစ်သွားပီ .. အဲ့ဒါကို နောက်တစ်ဘက်က ကြည့်ရင် ” ဂ” ပီးတော့ “ပ” ပီးတော့ ..”I” (ဒေါင်လိုက်ကြည့်ရင်လေ) ဖြစ်နေအုံးမလားဘဲ . ဟီး ..
ကျွန်တော် သိချင်တာက .. ဘယ်ဘက်က ကြည့်ကြည့် မှန်နိုင်မယ့် အမှန်တရား ရှိပါလား .. ? ရှိရင် သိချင်ပါတယ် ..
ဘုန်းဘုန်း ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ၊ ဘုန်းဘုန်းဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝ ပါစေ ..
တကယ်အမှန်တရားကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သစ္စာလေးပါးတရားကိုသာ အားထုတ်ကြည့်ပါ။ ဘယ်တော့မှ အမှားဆိုတာဖြစ်မလာသလို ဘယ်သူကမှလဲ မှားတယ်လို့ ကြိုက်တဲ့ရှု့ထောင်ကနေ ငြင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်း ရှေးကကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့ အမှန်တရားကို မိမိတို့က ကိုယ်တိုင်မကျင့်ကြံဘဲ သူများပြောခဲ့တာကို မဟုတ်ဘူး၊ မမှန်ဘူးလို့ ငြင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ သဘာဝမကျတဲ့အတွက် အဲဒီလူနဲ့ ဆက်လက်ငြင်းစရာ အကြောင်းမရှိပေ။ ဒါကြောင့် သူများပြောတာ ဟုတ်မဟုတ်ကို ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လေ့လာကြည့်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ခံစားပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ-ထွက်သက်ဝင်သက်စတဲ့ ၀ိပဿနာတရားကို နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာနဲ့ စိတ်ဝင်စားစွာ အားထုတ်တဲ့မည်သည့်လူမဆို စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ အမှန်တရားပါ။ မမှန်ဘူးထင်ရင် ကိုယ်တိုင်နည်းစနစ်မှန်သိအောင် လေ့လာပြီး ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။